Pez, Naguisa ururinta kabaha cusub ee SS22 | Bezzia
Naguisa waa mid ka mid ah shirkadaha Isbaanishka ee aan jeclaan lahaa inaan ka helo dharkayga. Waxaan horey kuugu tusay soo jeedintiisa Bezzia tanina waxay u badan tahay inaysan noqon doonin markii ugu dambeysay ee uu sameeyo. Oo waa kan cusub Ururinta kabaha SS22 by Naguisa Mar kale ayuu i qanciyay!
Pez waa martiqaad lagu sahaminayo oo la jebiyo kuwa la aasaasay. Soo ururin ay dhiirigelisay muraayadaha qorraxda ee biyaha, ee dhalaalka midabada la miisaamay ee kalluunka iyo qaar ka mid ah midabada fauna ee badda. Sidaa darteed, shirkaddu waxay ku daraysaa lahjadaha midabka ee ururinta taas oo aan classics-keeda midkoodna ka maqnayn.
Waxaan u mahadcelinayaa ololayaasha geliyey alaabta iftiinka oo si cad u soo bandhiga. Waxaa laga yaabaa in taasi tahay sababta aan aad ugu jeclahay iyaga. Sawirada Cecilia Renard, oo qaabaynteeda ay u xilsaartay Silvia Gutiérrez. Dhexdooda waxaan ku qadarin karnaa kabaha maqaarka ee shirkadda, calaamadaha tidcan iyo espadrilles; wuxuu naqshadeeyaa dhamaantood oo loogu talagalay maalinba maalinta ka dambeysa.
1 Kabaha kabaha
Astaamaha saxiixa ayaa mar kale ku jira ururintan cusub. Maanta, si kastaba ha ahaatee, waxaan diiradda saareynaa naqshadaha ay shirkadu rabtay inay ku muujiso ololaheeda. In kabaha Anea guduudan ee maxi-saamaynta maqaar tidcan iyo Falua, qaab sidoo kale lagu tidcay cirib dhexdhexaad ah oo cagta lagu dhejiyay oo leh suunka ka gudba jaranjarada si loo helo taageero weyn.
Marka lagu daro kuwa kor ku xusan, Barbo waxay u taagan tahay wax-qabadkeeda, kabo T-nooca ah oo leh jeexan haragga idaha, suulasha furan iyo canqowga. Iyo kabaha carsaanyo Amura iyo Alosa. Midka ugu horreeya oo hooseeya oo leh midabyo isku dhafan; ka labaad oo leh wadar dhan 6,5 sentimitir oo siman.
The espadrilles door weyn ka qaataan ololahan cusub. Waxay u taagan yihiin midabkooda Ancor, espadrille leh velcro iyo jeexan maqaarka idaha oo laga heli karo huruud, brownie iyo madow; iyo Bullo, mid sandal madal leh cirib xanniban, goyn goyn oo majarafad ah, suulasha furan iyo baalka anqawga.
Ma waxaad door bidaa wax ka caadi ah? Waxaad jeclaan doontaa Soc, espadrille Waxaa dhiirigeliyay "espardenya" qoob-ka-ciyaarka gobolka todobo-ribbon; iyo Thalis, kabaha nooca carsaanyoska ah ee daboolaya daboolkeena oo ku hagaajiya marinka cirifka.
Ma jeceshahay ururinta kabaha Naguisa SS22?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » zapatos » Pez, Naguisa ururinta kabaha cusub ee SS22
Khatarta ay leedahay fikradda lamaanaha